Home News Ciidamada Amaanka oo howlgalo ka wada Magaalada Baydhabo
Ciidamada Amaanka ayaa saakay waxaa ay baaritaano ka wadaan Xaafadaha guud ee Magaalada Baydhabo ee Gobalka Bay.
Baaritaanka ayaa ka dambeeyay kadib markii xalay weerar bambaanooyin ah lagu qaaday Guriga Xildhibaan hore uu ka degan yahay Magalada Baydhabo, kaasi oo lagu magacaabo Maaxamed Kheyr Xaaji Maxamed Ibraahim Hiireey.
Dadka deegaanka ayaa KNN u sheegay in weli baaritaanada ay socdaan, islamarkaana ma jirto cid lagu soo qabtay Baaritaankaasi.
Bambaanooyinka lagu weeraray Guriga Xildhibaan hore oo ka tirsanaa Dowladii Madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa waxaa ku dhaawacmay Saddex ruux oo Guriga ku sugnaa.
Previous articleKhilaaf xooggan oo soo kala dhex-galay Madaxda ugu sareysa Puntland
Next articleDowladda Talyaaniga oo balan qaaday iney taageero siin doonto Soomaaliya
Kulamo Xasaasi ah oo wali ka Socda Garoowe!!